အနောက်တိုင်းစတိုင် အားလူးကက်တလိပ်ကြော် | Wutyee Food House
« ‘ဘေကွန် ပုဇွန်ကင်’
December 17, 2011 by chowutyee
အနောက်တိုင်း မှာတော့ Coquette potato လို့ခေါ်ပါတယ်။ အနောက်တိုင်း စတိုင်အားလူး ကက်တလိပ်ကြော်ရဲ့ ထူးခြားမူက ထောပတ်နံလေးမွှေးနေပြီး အရသာသည် အလွန်ကြွပ်ရွ စားလို့လည်း အလွန်ကောင်းပါသည်။
၁။ အာလူး – ၃၀ကျပ်သား
၂။ ထောပတ် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း
၃။ ဆား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်း
၄။ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၅။ ပါမုန့်ခြောက် (breadcrumb)
၇။ ကြက်ဥ – ၁လုံး (ခလောက်ပေးပါ)
၁။ အားလူး အားလုံးကို နူးအိအောင် ၁၀မိနစ်ခန့် ပြုတ်ပေးပါ။
၂။ ပြီးလျှင် အားလူးကို အခွံနွာပြီး ခြစ်တံဖြင့် ခြစ်ပြီး အားလူးများကို ခြေပေးပါ။
၃။ ထို့နောက် ထောပတ်၊ ဆား၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် များကို အားလူးထဲထည့် ရောနုယ်ပေးပါ။
၄။ အားလူးများကို အလုံးငယ်လေးများ လုံးပေးပါ။
၅။ ပြီးလျှင် ပန်းကန်ပြားတစ်ခုထဲ ဂျုံမှုန့်များထည့်ပြီး အားလူးလုံးများကို ဂျုံကပ်ပေးပါ။
၆။ ပြီးနောက် ခလောက်ထားသော ကြက်ဥခွက်ထဲ အားလူးလုံးများကို နှစ်စိမ်ပေးပြီး ပါမုန့်ခြောက် (breadcrumb) ထည့်ထားသော ပန်းကန်ပြားထဲထည့် ပါမုန့်ခြောက်များ ကပ်ပေးပါ။
ရ။ ဒယ်ထဲ ဆီများများထည့်၍ အားလူးလုံးများကို မီးနည်းနည်းဖြင့် အညှိရောင်သန်းလာ သည်အထိ ကြော်ပေးပါ။ အားလူးကက်တလစ်ကြော်ကို မရိုနိစ်ဖြင့် တွဲဖက်၍ စားသုံးနိုင်ပါပြီး။
Posted in အနောက်တိုင်း ချက်ြ့ပုတ်နည်း | 13 Comments
on February 1, 2010 at 9:57 am | Reply Hmone Gyi
wow it look yummy…thx for posting 😉 i will really try tonight…i tired before but didn’t success 😛
on February 2, 2010 at 2:23 am | Reply chowutyee
haa ok pls try it 😉
on February 2, 2010 at 4:49 pm | Reply Fatty
Taste so nice! Better than traditional အာလူးကပ်တလိပ်! Perfect match with mayonnaise 😉
on February 3, 2010 at 2:13 pm | Reply chowutyee
thi la cshi lar
on February 4, 2010 at 11:14 am | Reply Fatty
သိဆို ဒီပုံထဲက ဟင်းကို စားထားတာကိုး 😀
on March 2, 2010 at 7:25 pm | Reply Julio
A croquette isasmall fried food roll containing usually as main ingredients mashed potatoes, and/or minced meat (veal, beef, chicken, or turkey), shellfish, fish, vegetables, and soaked white bread, egg, onion, spices and herbs, wine, milk, or any of the combination thereof, sometimes withafilling, often encased in breadcrumbs.
The croquette is usually shaped intoacylinder or disk, and then deep-fried. The croquette (from the French croquer, “to crunch”) wasaFrench invention that gained worldwide popularity, both asadelicacy and asafast food.
on March 3, 2010 at 8:25 am | Reply chowutyee
Thanks for yours info!! 🙂
on December 18, 2011 at 11:02 am | Reply ခင်ယမုံ
ခရစ်စမတ်နဲ့ New Year မှာလုပ်စားဖို့ ဟင်းအမယ်တွေများလာပြီ..
on December 20, 2011 at 3:01 pm | Reply chowutyee
မခင်ယမုံကိုလည်း ၀တ်ရည်က ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အမြဲအားပေးလို့။ နောက်ထပ် ကင်နည်းလေးတွေ ထပ်တင်ပေးအုန်းမယ်။ ကျွေးချင်တယ် ဆိုတဲ့ စေတနာနဲ့တင် ၀တ်ရည် တကယ် ဗိုက်ပြည့်သွားပြီ။ ကျေးဇူးပါနော်.. 🙂
on December 18, 2011 at 1:30 pm | Reply မဖြိုး
on December 20, 2011 at 2:57 pm | Reply chowutyee
တခါတလေတော့ ၀တ်ရည်လည်း အိမ်မှာပဲ ကိုယ်တိုင် မရိုနိစ် လုပ်စားဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် အလွယ်တကူတော့ ၀ယ်ပဲ စားလိုက်တယ်။
– အရင်ဆုံး ကြက်ဥအနှစ်တစ်လုံးကို ခလောက်ထားပါ။
– ပြီလျှင် French Mustard (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်)ခန့် ထည့်ပြီ ကြက်ဥနှင့် ရောမွှေလိုက်ပါ။
– ထို့နောက် သံလွင်ဆီ နည်းနည်းချင်း ထည့်သည်နှင့် တပြိုင်နက် တဖက်လက်ဖြင့် ကြက်ဥခွက်ကို နာနာလေး ခလောက်ပေးပါ။
– ဆီများလာလျှင် တဖြည်းဖြည်း မရိုနစ် ဖြူလာလျှင် ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်သလို ဆား၊ သကြားထည့်ပြီ သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ…
on February 27, 2012 at 7:06 am | Reply Yan Naung
With Potato powder can do ?
on May 14, 2012 at 1:58 pm | Reply About: Cho Wut Yee